IMEX Inotungamira Nzira paMisangano yeEuropean uye Kufamba Kwemagungano
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » IMEX Inotungamira Nzira paMisangano yeEuropean uye Kufamba Kwemagungano
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Ichitungamira nzira mune ramangwana remisangano yeEuropean uye indasitiri yekokorodzano, MMGY Hills Balfour neMMGY Travel Intelligence Europe vari kushanda pamwe nepasi rose reheavyweight uye mutungamiri weindasitiri yeMICE, IMEX, kugadzira nekumisa ongororo ya2021 / 22 yakanzi "Mufananidzo we Misangano yeEuropean uye Kufamba Kokorodzano: Maonero kubva kune vafambi uye nyanzvi dzekuronga. ”
Iyi ongororo yakagadzirirwa kuongorora kwete chete musangano kuronga manzwiro asiwo zvakakomba, zvinangwa uye zvido zvevanoenda.
Izvo zvinobatsira kutungamira zvisarudzo pane zvekudyara, kushambadzira bhajeti, kukura kwese, uye nzira dzekuvandudza.
Iyi ongororo ichapa kunzwisisika, kwakazara, uye panguva inonzwisisika yemisangano nemagungano eEuropean anotaridzika sei ikozvino uye mune ramangwana.
Yekutanga yerudzi rwayo muEurope, iyi ongororo yakagadzirirwa kuongorora kupfuura zviripo paramende, ichiongorora kwete chete kusangana nemurongi manzwiro asiwo zvine mutsindo, zvinangwa nezvido zvevapindi. Nzvimbo dzeEuropean nepasirese pamwe nevemaindasitiri evashanyi vane mukana wekutungamira kudzoka munharaunda mavo, zvichibva nekuti indasitiri yemisangano inodzoka riini uye sei kubva kuCOVID-19. Iyi ongororo ichabatsira kutungamira sarudzo yavo pamari dzekudyara, bhajeti rekushambadzira, kukura kwese uye nzira dzekuvandudza nekupa nzwisiso yakajeka, yakazara uye inonzwisisika yezvakaita misangano nemagungano eEuropean izvozvi uye mune ramangwana.
Mufananidzo weMisangano yeEuropean uye Kufamba Kwemagungano
Sezvakaratidzwa muMOGGY Travel Intelligence's ichangopfuura ongororo yeUS, panogona kuve nemusiyano wakakura pakati pemafungiro nemaitiro pakati pevarongi nevanopinda. Europe ndiyo imba yemahofisi makuru evamwe vakarongeka vezvemabhizimusi epasi rese uye, neruzivo rwakakosha rwunopihwa kubva kuongororo iyi, nzvimbo dzavanogona kuenda dzinogona kuva nechivimbo neruzivo rwavo uye nekunzwisisa kwenzvimbo dzeEurope dzinobuda neMICE mumwedzi nemakore anotevera.
Vachitaura nezve ongororo yeUS, Butch Spyridon, Mutungamiri uye CEO weNashville Convention & Visitors Corporation (NCVC), vakati: "Ongororo yeMisangano neKokorodzano yakaitwa neMMGY Travel Intelligence yakaratidza chimiro chechokwadi chenzvimbo yeindasitiri iyi uye yakapa ruzivo rwakakosha pamusoro penzvimbo iyi. Varongi veUS 'uye varipo' pfungwa. Nekubatsira kweiyi data chaiyo, Nashville inokwanisa kugadzira yakasimba, inokodzera uye yekumberi-kufunga zano reM & C, ichibatsira kuisa patsva uye kukurudzira chipo chedu kudzokera kumusika. "
Carina Bauer, IMEX Boka CEO, akataura kuti: "Sezvo misangano yeEuropean uye maindasitiri ezviitiko anotanga 'kuvaka kumberi zviri nani,' izvi zvakawanikwa pakutsvagisa zvichapa maonero matsva neruzivo rwebhizinesi rwakavakirwa pazwi rakamirira, data revamiriri. Isu tese tine visceral pfungwa yekwatakabva uye zvatakange tapfuura makore maviri apfuura. Tsvagurudzo iyi inoda kuratidza zvakajeka kujekesa kwatiri kuenda. ”
Yakatemerwa kune vanoronga kutenderedza kutenderera Europe uye kune vanoenda kuUK, Germany, France neThe Netherlands, ongororo ichaitwa mumafungu maviri: yekutanga muQ4 2021 uye yechipiri muQ1 2022.
Inotarisa nyaya dzakakodzera uye dzinoenderana nenguva senge:
● Vanopinda vanonzwa sei pamusoro pemisangano chaiyo uye yakasanganiswa uye vanofunga kuti maitiro avo anogona kukanganiswa sei muna 2022 nekupfuura?
● Ndeapi mamisangano enzvimbo anoita kukwezva vanopinda kuenda kumberi uye izvi zvido zvachinja sei nekuda kwe COVID-19?
● Pane zvimwe zvikamu zveindasitiri zvinowanzoitika kupfuura zvimwe zvikamu zveindasitiri kuti zvirambe zvichipinda zvakafanana nezvavakaita pamberi pe COVID-19?
● Ndezvipi zvirimo, nzvimbo uye / kana zvinokurudzirwa zvingave zvinomanikidza zvakakwana varipo kuti vatore danho rekushanyira musangano?
● Ndezvipi zvipingamupinyi, kunze kwekushushikana kuri pachena kwehutano nekuchengetedza, zvinoda kubviswa kana kudzikiswa?
● Ndeapi masangano emisangano (ex. SMERF, mubatanidzwa, wemakambani, nezvimwewo) vanoronga vanotarisira kupora kutanga uye ndeupi mutsara wenguva unofungidzirwa?
● Masangano ekushambadzira uye manejimendi anogona sei kusangana zvirinani nemisangano yekutengesa izvozvi uye mune ramangwana?
● Kusangana kwezvinhu zvinobatsira kana mashandisirwo ezvinhu zvinogona kukanganisa sei kuronga kweboka, uye matanho api matsva ezvekuchengetedza angave akakosha kune vese vanoronga nevanopinda?